जानी जानी यस्तो गरिन् , दुवै हात गु'माएका सुरेशको ४ वर्षे जेठी महान श्रीमती (भिडियो सहित) -
Homeसमाचारजानी जानी यस्तो गरिन् , दुवै हात गु’माएका सुरेशको ४ वर्षे जेठी महान श्रीमती (भिडियो सहित)
जानी जानी यस्तो गरिन् , दुवै हात गु’माएका सुरेशको ४ वर्षे जेठी महान श्रीमती (भिडियो सहित)
April 28, 2021 admin समाचार 467
बाके समसे’रगंज स्थित एक प्रेम जोडी अहिले काम को खो’जि मा काठमाडौँ सम्म आ’एका छन्। प्रेम बिबाह गरेका सुरेश र एलिना ले ३ बर्ष को प्रेम बाट बिबाह गरेका हुन्। बिबाह पछि संगै मर्ने संगै बाच्ने भनि कसम खाएर बि’बाह गरेका यो जोडी अहिले काठमाडौँ सम्म आएका छन्। काम को सिलसिला मा लम्जु’ङ्ग गएका सुरेश ले मिस्त्री काम गर्ने क्रम मा करेन्ट लागेर सुरेश ले अहिले दुवै हात गु’माएका छन्।
दुवै हात गु’माए संगै सुरेश ले केहि काम गर्न नसक्ने अवस्था मा पुगे , उनि घर फर्किए। घरमा अब सबैको हेला हुन्छु भनेर नि’रास भएका सुरेश लाई श्री’मती एलिना ले साथ् दीईन। श्रीमान जस्तो अवस्था मा भए पनि मैले साथ् दिनु पर्छ, प्रेम बिबाह गरे पछि साथ् छोड्नु हुदैन भनेर एलिना ले अहिले सम्म साथ् दिए’कि छिन्। गाउ घर मा मेला पात गरेर भए भनी श्री’मती ले सुरेश लाई खुशी दिएकि छिन्।
माया’को चिनो को रुप मा एक छोरि को जन्म भएको थियो , छोरि को पनि उपचार गर्न नसकेर १ महिना मै मृत्यु भयो। सहयोग गर्ने कोहि नभए पछि उनीहरु काम’को लागि काठमाडौँ आएका छन्। माइती ले सधै सुरेश लाई छोड , त्यो बाट केहि सुख हुदैन , भनि सधै बोला’उछन्। मैले सुरेश लाई धेरै माया गर्छु त्यसैले छु’टाउछन् भनि हामी यहाँ सम्म आएका छौ। तर यहाँ काम पा’उन धेरै गा’र्हो हुदो रहेछ।
यो जोडी को बि’जोग भए पछि अहिले को लागि भोजराज थापा ले २५०० सहयोग गरेका छन्। मला’ई जसले जे भने पनि मैले श्रीमान लाई छोड्ने छैन। मैले आफै मन पराएर बिहे गरेको हो , म श्रीमान भन्दा ४ बर्ष ले जेठी छु , त्यसैले मैले उहाको सबै पिडा बुज्ने गर्छु। म पनि पेट सम्बन्धि बिरा’मी छु। पाए काम गर्छु संगै बस्छौ। सुरेश भन्छन मलाई मेरो श्रीमती ले धेरै मा’या गर्छे। मैले पनि उसलाई धेरै माया गर्छु , मैले सकेको काम मा पनि सह’योग गर्छु। इताजा खबरबाट
अस्पतालमा पोस्ट-मार्टम गर्न लगिएको, श’व चिया पिउँदै गरेको भेटिएपछि…
March 8, 2021 admin समाचार 2057
६६ दिनको लामो बे’होसी जिन्दगीपछि कञ्चनले आइतबार अन्तिम सास फेरे । त्यस पछि उत्प’न्न परिस्थितीले अहिले अनिशाको जिव’नमा पनि प्र’भाव पारेको छ । अस्पतालवाट परिवारले कञ्चनको श’व सिधै अनिशाको घरमा लिएर गएका छन् । कञ्चन
November 29, 2020 admin समाचार 3619
February 25, 2021 admin समाचार 1493
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (173025)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (166878)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (166507)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (166315)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (165353)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (163984)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (163516)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (161989)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (156715)